ကာတွန်းစာအုပ်များ ဖတ်နိုင်ပြီ - မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့
အဖွဲ့ အားလုံးကိုယ့်အဖွဲ့ တွေ ကာတွန်းစာအုပ်များ ဖတ်နိုင်ပြီ
သူ့ရဲ့ အဖွဲ့ တွေကို ကြည့်မယ်
ကာတွန်း ဓာတ်ပုံများနှင့် အသိပညာဗဟုသုတများကို
တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူများကို လာရောက်
လေ့လာကြပါရန် သူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
အခြေစိုက်ရာ ဌာနေ မြန်မာ
အဖွဲ့ဝင်တွေ - 141
နောက်ဆုံးလုပ်ရှားသွားမှု - အောက်တိုဘာလ 10 နှစ်သက်တယ် 33 members like this
+!!!★*♥SNOW HNINN!!★*♥!!!+ကစရေးခဲ့တာပါခင်ဗျား နောက်ဆုံးပြန်စာကိုတော့ ♥မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ♥ ရေးသွားပါတယ်။ (အောက်တိုဘာလ 10ပါ) 1 Reply
(ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်)အညွန်း - ကာတွန်း ကာတွန်းဆိုတာ
N@n L@y & Ko Koကစရေးခဲ့တာပါခင်ဗျား နောက်ဆုံးပြန်စာကိုတော့ ♥မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ♥ ရေးသွားပါတယ်။ (အောက်တိုဘာလ 10ပါ)2Replies
ကာတွန်းဆိုတာ အပျင်းပြေပါကာတွန်းပုံလေးနဲ့ ဟာသဇာတ်လမ်းလေးတွေဆိုအရမ်းကြိုက်တယ်တာယာပွကြီးတို့ ထွေးမွန်လေးမွန်တို့ သမိန်ပေါသွပ်တို့ မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီတို့ဦးစိတ်တိုနဲ့မျောက်ညိုဇာတ်လမ်းလေးတွေ အရမ်းဖတ်ချင်တယ်။(ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်)အညွန်း - NanLay ***ကာတွန်းလေးတွေဝေမျှခဲ့ပါတယ်***၂***
+!!!★*♥SNOW HNINN!!★*♥!!!+စတင်ခဲ့ပါတယ် (စက်တမ်ဘာလ 17)0Replies
(ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်)အညွန်း - ကာတွန်း ***ကာတွန်းလေးတွေဝေမျှခဲ့ပါတယ်***၁***
(ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့မယ်)အညွန်း - ကာတွန်း အားလုံးကိုကြည့်မယ်
ကာတွန်းစာအုပ်များ ဖတ်နိုင်ပြီ ရဲ့ အဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်မှ မှတ်ချက်ပေးလို့ရမှာပါခင်ဗျ
♥မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ♥ က အောက်တိုဘာလ 10, 2014 ရက်နေ့ 1:13pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား တားက ခယေးဆိုတော့ ကတွန်း ကြိုက်မှကြိုက် Tun myat က အောက်တိုဘာလ 8, 2014 ရက်နေ့ 7:03pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား အဖွဲ့ ဝင်သွားတယ်နော်.............. +!!!★*♥SNOW HNINN!!★*♥!!!+ က စက်တမ်ဘာလ 17, 2014 ရက်နေ့ 4:40pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား ကာတွန်းလေးတွေထပ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ် yethwemg5512 က သြဂတ်စ်လ 27, 2014 ရက်နေ့ 8:15am မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား ဒီနေ့ တွတ်ပီ ကံကောင်းတယ် ဧရာဝတီသား က သြဂတ်စ်လ 18, 2014 ရက်နေ့ 5:52pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား ဗိုက်ကလေးနဲ့မသေမင်း အဖွဲ့ဝင်ဆွားတယ်ဂျာ+++++sainawko+++++ က သြဂတ်စ်လ 16, 2014 ရက်နေ့ 1:02pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား တွက်ပီ ဖက်ချင်တယ်ဗျိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မြတ်နိုးခင် က သြဂတ်စ်လ 10, 2014 ရက်နေ့ 10:36am မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား တွတ်ပီ
လေးမွန်ထွေးမွန် ကြိုက်တယ်ဗျို့ M@y L@y က သြဂတ်စ်လ 7, 2014 ရက်နေ့ 3:36pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား လေးမွန်ထွေးမွန်ဖတ်ချင်တယ်ဗျို့
မဟော်မျိုးမင်းကို က သြဂတ်စ်လ 7, 2014 ရက်နေ့ 9:27am မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား ရယ်ရမလား မောရမလား ထေ့ရမလား သော့ရမလား အထေ့အသော အတို့အငေါ့နှင့်
ဟာသကမ္ဘာ ရယ်စရာမို့ ကာတွန်းမန်ဘာ ၀င်သွားပါ၏ N@n L@y & Ko Ko က သြဂတ်စ်လ 5, 2014 ရက်နေ့ 11:29pm မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား ကာတွန်းကိုကြိုက်လို့အဖွဲ့ဝင်သွား၏ ‹ ရှေ့ သို့
2. သူနဲ့ ကျွန်နော်
3. မငိုပါနဲ့လား ချစ်သူ